तपाईले आफ्ना छोराछोरीको नाम कस्तो राख्ने, चल्तीको कि रचनात्मक ? - नेपालबहस
तपाईले आफ्ना छोराछोरीको नाम कस्तो राख्ने, चल्तीको कि रचनात्मक ?
| १८:१९:५९ मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडौं । तपाई हामी जन्मिने बित्तिकै हाम्रा आमा वुबाले राखिदिने नामले तपाईको व्यक्तित्वलाई कसरी प्रभावित पार्छ ? के यो विषयमा कहिले सोच्नु भएको छ । हामी ठूला भएर आफ्ना लागि नाम परिवर्तन गर्न नचाहेसम्म हामी अधिकांश जन्मेका बेला दिइएको नामले काम चलाइरहेका छौँ ।
व्यक्तिवादी मनोविज्ञानका एक जना संस्थापक गोर्डन अल्पटले सन् १९६१ मा हाम्रो जीवनभर रहने स्वयं पहिचानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा नामलाई व्याख्या गरेका थिए। आधारभूत तहमा नामले हाम्रो जाती वा अरू पृष्ठभूमिबारे बताउन सक्छ। खासगरी सामाजिक पूर्वाग्रहका कारण त्यस्तो पहिचानको परिणाम पनि देखिनसक्छ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यूयोर्कमा गरिएको आतङ्कवादी हमलापछि अरेबिक सुनिने नाम भएका व्यक्तिहरूलाई श्वेत सुनिने नाम भएका व्यक्तिको तुलनामा कम रोजगारीको अन्तरवार्तामा बोलाइएका अमेरिकी अनुसन्धानले देखाएको थियो।
एउटै संस्कृतिभित्र पनि आम रूपमा प्रयोग गरिने वा दुर्लभ खालका नामहरू हुन्छन् जसको निश्चित सकारात्मक वा नकारात्मक अर्थ हुनसक्छ। कतिपय नाम नरुचाइन सकिन्छ वा चल्तीमा नहुन सक्छन्। यस्ता विशेषताले अरूले हामीलाई कसरी व्यवहार गर्छन् र हामी आफ्नोबारेमा कस्तो महसुस गर्छौ भन्ने पनि देखाउँछ।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जीन टेवङ्गीको नेतृत्वमा सन् २००० को दशकमा भएको अध्ययनले परिवारको पृष्ठभूमि र जीवनप्रतिको सामान्य असन्तुष्टि नियन्त्रणमा भए पनि आफ्नो नाम नरुचाउने व्यक्तिहरूको मानसिक तनाव व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको जस्तो देखाएको थियो।
या त आत्मविश्वासको अभाव र कमजोर आत्मबलका कारण उनीहरूले आफ्नो नाम नरुचाएको वा नाम नरुचाएका कारण उनीहरूमा आत्मविश्वासको अभाव भएको भन्दै टेवङ्गी र उनका सह लेखकहरूले लेखेका थिए, ‘नाम स्वयंको प्रतीक बन्छ।’
आखिर नाममा के छ ?
नाम भनेको उसलाई चिनाउने, इंगित गर्ने यस्तो सांकेतिक कुरा हो, जो उनको पहिचान बन्छ । यसो सोच्दा ‘नाम’ भन्ने कुरा सामान्य लाग्छ । तर, अर्को तरिकाले सोच्दा ‘नाम’ भन्ने कुरा निकै गतिलो लाग्छ । हामी जीवनभर त्यही नाम बोकेर बाँच्छौं । आफु मरेपनि ‘नाम’ बाँचिरहोस् भन्ने आकंक्षा राख्छौं । यति मूल्यवान् छ, नाम । त्यही कारण त अहिलेका आमाबुबालाई आफ्ना ‘छोराछोरीको नाम के राख्ने’ भन्ने विषयले निकै सोचमग्न बनाउने गर्छ ।
यस्तै , सन् २०११ मा गरिएको एउटा डेटिङ वेबसाइटमा गरिएको जर्मन अध्ययनका क्रममा नामका आधारमा डेट गर्न चाहने सम्भावित व्यक्तिको चयनबारे सोधिएको थियो। त्यसमा चल्तीमा रहेका एलेक्जेन्डर जस्ता नामको तुलनामा उस बेला अलोकप्रिय रहेका केभीन जस्ता नाम भएका अस्वीकृत हुने सम्भावना बढी रहेको पाइएको थियो।
जर्मनीमै गरिएका नयाँ अध्ययनमा नकारात्मक भनिएका नाम भएका नचिनेका व्यक्तिले अपरिचित तर सकारात्मक नाम भएका व्यक्तिभन्दा मानिसहरूबाट कम मद्दत पाउने सम्भावना रहेको देखाएको छ।
तेसो त हालैका कतिपय अध्ययनले नामका सकारात्मक प्रभावको पनि चर्चा गरेका छन्। उदाहरणका लागि सहजै बग्ने मर्ला जस्ता नाम भएका व्यक्तिहरूका बारेमा मानिसहरूले अवरोध सहित सुनिने एरिक वा किर्क जस्ता नाम भएका व्यक्तिको तुलनामा सुरुमै धारणा बनाउने र सहजै सहमत हुने विश्वास व्यक्त गर्न सक्छन्।
त्यसबाहेक चल्तीको नाम नहुँदा तत्कालमा नोक्सान भएपनि दीर्घकालमा बढी व्यक्तिगत विशेषताको बुझाइले लाभ दिनसक्छ। चाइ र उनको टोलीको अध्ययनले दुर्लभ खालका नाम भएका व्यक्तिहरू अस्वाभाविक पेसा जस्तै चलचित्र निर्देशक वा न्यायाधीश जस्ता जीवन वृतिमा जोडिएको पाएको थियो।
एरिजोना विश्वविद्‌यालयका चु भन्छन् अस्वाभाविक नाम भएकै कारण बढी रचनात्मक र खुला सोच बनाउन हामीलाई सघाउन सक्छ। तपाई सम्भावित अभिभावक हो भने चल्तीको नाम राख्ने कि रचनात्मक रूपमा अरूभन्दा फरक नाम दिने सोचिरहनुभएको होला। त्यस्ता छनोटका फाइदा वा बेफाइदा दुवै हुने भन्दै चु अभिभावकहरूले दुवैलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। बीबीसी
पूजा र श्वेताले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितहरुलाई सहयोग वितरण गर्ने १ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञामा सलिनमान आफ्नै युटुबमा च्यानलमा मस्त २ हप्ता पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभाव हुँदैनः मुख्यमन्त्री नेपाली ११ घण्टा पहिले
आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको जाल्पा लघुवित्तको मुनाफा २३३ प्रतिशतले बढ्यो ७ दिन पहिले
गोखार्ज फाइनान्सको शेयरमूल्यमा उच्च दरले गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ४ दिन पहिले
चन्द्रागिरि हिल्सको शेयरमूल्य बढ्यो, प्रतिकित्तामूल्य कति ? २ दिन पहिले
आज निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३,४४१ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा ५ दिन पहिले
निर्वाचन टुँग्गो छैन, आयुक्तहरुको सुविधा र भत्ता बढाइयो ७ दिन पहिले
महन्त ठाकुरसहित चार नेता पार्टीबाट निष्कासन ३ हप्ता पहिले
अब स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरे तीन वर्ष कैद बस्नुपर्ने ३ हप्ता पहिले
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि कविता प्रतियोगिता २ हप्ता पहिले
मनसुन प्रवेशसँगै यस वर्ष बाढीपहिरोको जोखिम उच्च ! २ हप्ता पहिले
प्रम जस्तै अस्वस्थ नेकपा ! २ वर्ष पहिले
चितवनमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक पुग्यो ३ हप्ता पहिले
यस्ताे छ, मिस नेपालले प्रयोग गर्ने कार ७ महिना पहिले